Best aga Europe Iji Njem N'oge A Weekend | Save A Train
Home > Travel Europe > Best aga Europe Iji Njem N'oge A Weekend
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/07/2020)
Okporo mmiri ụgbọelu maka ụgbọ okporo ígwè na-aga Europe maka a Weekend eche. Save A Train na-eme ka ọ dị mfe ka akwụkwọ n'ime nkeji na-enweghị kwukwara ụgwọ, otú i nwere ike na-enwe gị ego na-eme! Ebe a na-nhọrọ anyị maka Best aga Europe njem n'oge a izu ụka ụgbọ okporo ígwè.
Best Gateway Aga Europe njem n'oge a izu ụka: Barcelona
Anyị na-na-ekwurịta banyere ihe Spain a ugboro ole na ole. Ị nwere ike ịlele anyị ọzọ isiokwu si Ebe a. taa, anyị Atụmatụ Best aga Europe njem n'oge a izu ụka ụgbọ okporo ígwè na-elekwasị anya dị na Barcelona.
Barcelona bụ nnọọ mfe ohere site ọtụtụ akụkụ nke Europe, ma n'ihi na ala nke akwụkwọ, anyị ga-ahapụ si London n'ihi na nke a na njem. Nkume ọrụ 2 pm na a Friday, na oge ijide 3 pm Eurostar na Paris. E nwere ihe dị nnọọ oge maka a Vin Rouge na a Paris Cafe tupu abanye "ụgbọ okporo ígwè hotel" ka Barcelona.
Ugbu a, na ị na-e, ihe a ga-eme:
Eleghị anya ndị kasị ama Ọdịdị na Barcelona, na Sagrada Familia. The nnukwu ụlọ ụka Senti e mere site-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Gaudi na ha na e ewu a Ọdịdị kemgbe 1882. Ọ na-ike na-a picture enweghị cranes, ma ọ bụ maa kwesịrị a nleta.
Secret Barcelona n'ọnụ: Na backside nke nnukwu ụlọ ụka Senti e nwere otu obere ọdọ mmiri si na ebe ị pụrụ ịtụnanya photos. Nọgidenụ na Instagram game ike, na-akwụ n'ebe a a nleta.
Another ama Ọdịdị site Gaudi bụ Casa Batllo. Emi odude adịghị anya site Las Ramblas, ị ga-ahụ nke a pụrụ iche ụlọ na Passeig de Gracia. Ọ e wuru na 1877. Ọ bụrụ na ị fancy eleta ụlọ a na-achọ ịhụ n'ime oke, jide n'aka na ị na-azụta tiketi n'ọdịnihu, ọ bụ a na-ewu ewu njegharị mma na Barcelona na nwere ike inwe nnọọ ọrụ n'aka, karịsịa na elu oge.
fun Eziokwu: nke ugbu a nwe Casa Batllo bụ Bernat ezinụlọ, known for being the owners of Chupa Chups lollipops.
Oge gaba home.
The 9 pm trainhotel on Sunday n'abalị ga-ị azụ Central London na 11:55m na Monday.
Best Gateway Aga Europe njem n'oge a izu ụka: Rome
The Ebighị Ebi City bụ dị ka alluring dị ka mgbe anyị nwere ike ikwu okwu banyere a Weekend getaway enweghị ya! Were a nri ehihie Eurostar na mgbanwe Paris maka Rome. Ịdịgide n'elu nri abalị ke restaurant ụgbọ ala, ịla ezumike nká gị sleeper ma ọ bụ couchette maka n'abalị, na na na a classic Italian odida obodo.
Rome bụ mfe onye nke anyị ọkacha mmasị obodo na Europe. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na na honiimuunu. I nwere ike na-agụ banyere na ebe a.Ebe a. E nwere ihe na maka onye ọ bụla doo. The ebe jupụtara n'ọnu na nlegharị anya na nwere ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ihe mere eme yikwasịkwara n'elu ya onwe ya - ị ga-ahụ ihe niile ebe a si Roman mkpọmkpọ ebe na Renaissance art. Ọ bụ na-obibi egwu nri! n'ezie 3 ụbọchị Rome bụghị iji hụ oké ihe niile na obodo nwere na-enye, ma ọ bụ maa iji hụ niile ẹkenemede ọ bụrụ na ị jikwaa oge gị ihe n'ụzọ dị irè.
The Vatican City bụ ihe mbụ na anyị ndepụta gị nleta Rome. Ọ bụ a mba nke ya, n'ime Rome, na bụ n'ụlọ ka ụwa na-ama na saịtị gụnyere Vatican Museum, na Sistine banye n'Ụlọ Ekpere, na St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti.
Anyị nwere ike ikwu na ị na-abịa ebe a n'oge na-gaba ogologo maka Vatican Museum na gị kwuo akara tiketi. Anyị ekpuchi ụzọ kwuo na e Rome n'ihu na a post, ma ọ bụrụ na ị na-azụ ihe Omnia Rome na Vatican ngafe, ị ga-nhọrọ-eji akwụkwọ a timeslot gị ikwu akara ntinye.
Best Gateway aga Europe njem n'oge a izu ụka: Brussels na Amsterdam
Ọhụrụ-nwoke elu-ọsọ Eurostar Zụlite London ka Amsterdam. Journeys n'etiti London na Brussels-eji were 5 awa na aka a mgbanwe nke ụgbọ oloko na Brussels. The ọhụrụ ụgbọ okporo uche iga 900 njem a ụbọchị na ga-naanị 4 awa. Zuru okè n'ihi na a njem Brussels ma ọ bụ Amsterdam maka Weekend!
Gịnị na-eme na Brussels n'oge a izu ụka Gateway:
E nwere ọtụtụ ihe na-eme na Brussels, karịsịa na a mkpumkpu izu ụka njem. Ọ bụ otu n'ime ndị obodo nke bụ zuru okè n'ihi na a ogologo izu ụka, ịgagharị niile akụkọ ihe mere eme saịtị na ịkwa emo niile waffles i nwere ike inwe aka gị na.
Ọ dịghị mkpa otú ọtụtụ ugboro ị gara Grand Place, ọ bụ ihe ebe bụ mgbe mara mma ileta. -Akpa azụ fọrọ nke nta 300 afọ, Grand Place bụ kwa ọmarịcha uche.
N'otu oge mgbe nke afọ, ị ga-ahụ a ole na ole dị iche iche ihe, ahịa, na nkà nrụnye. Echefula ileta Brussels City Museum na Town Ụlọ Nzukọ na-ma n'elu ugwu ahụ square.
Paris na Liège Ụgbọ oloko
Brussels ka Liège Ụgbọ oloko
Brussels nwere nnukwu (na ikekwe, ndị kasị ukwuu) kootuhausu nile nke Europe. ugbu a, e nwere ugbu a na-ụfọdụ restorations na-arụ ọrụ na-aga n'ihu ma na kwesịrị ịkwụsị gị nleta - ọ bụ n'ezie a ọmarịcha ụlọ.
Gịnị ka i chere anyị aro? Anyị ga-amasị mara! echeta, Save A Train bụ super mfe iji na mgbe odịbe akwụ ụgwọ! Akwụkwọ gị Weekend pụọ site n'ụgbọ okporo ígwè na anyị, taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-travel-during-weekend/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / ja ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #izu ụka Barcelona eurostar ezumike travelamsterdam travelrome vaticancity